Saxaraha ugu quruxda badan Afrika: laga bilaabo Sahara ilaa Teneré | Wararka Safarka
Luis Martinez | 15/09/2021 14:00 | La cusbooneysiiyay 17/09/2021 08:57 | Afrika, Guides
U Safarka saxaraha ugu quruxda badan Afrika Waxay kuu malayn doontaa qaddar aad u weyn oo xiiso leh, laakiin sidoo kale inaad naftaada ku hesho muuqaallo cajiib ah. Maaha wax la yaab leh, meelahaas qaarkood, inkasta oo ay fudud yihiin, ayaa ka mid ah kuwa ugu quruxda badan meeraha.
Sida haddii waxaas oo dhami aysan ku filnayn, lamadegaanku waxay leeyihiin nooc sixir ah ruuxa. Fududeyntiisa iyo baaxaddiisu waxay kaa caawineysaa inaad garatid waxyaabaha aan loo baahnayn ee alaabta, waxay kaa caawinayaan inaad ka takhalusto welwelka adduunka oo aad ku xirnaato dabeecadda. Laakiin, iyada oo aan la sii hadal haynin, waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah lamadegaanka ugu quruxda badan Afrika.
1 Saxaraha ugu quruxda badan Afrika: Maxaad ka arki kartaa iyaga?
1.1 Saxaraha Saxaraha
1.2 Lamadegaanka Kalahari
1.3 Lamadegii hore ee Namib
1.4 Danakil, oo ka mid ah saxaraha ugu quruxda badan Afrika
1.5 Tenerife Desert, fidinta Sahara
Saxaraha ugu quruxda badan Afrika: Maxaad ka arki kartaa iyaga?
Qaarad kasta oo adduunka ah waxaa ka jira lama -degaanno cajiib ah. Waa ku filan inaan xusno, tusaale ahaan, kan Atacama Koonfurta Ameerika (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan saxarahaan), kan ah Gobi Aasiya ama tan Tavernka (Spain) ee Yurub. Xitaa, si adag u hadalka, meelaha sida Greenland waa lamadegaan aan ciid lahayn, waa baraf iyo baraf.
Laakiin meelaha adduunka oo dhan, laga yaabee in tirada ugu badan ee lamadegaanka laga helo Afrika. Intaa waxaa dheer, fidintooda mid walba aad bay u weyn tahay oo waxay qabsadeen qayb wanaagsan oo ka mid ah dusha qaaraddan. Si kastaba ha ahaatee, si aan kuu tuso, waxa ugu fiican ayaa ah inaan horeba kaaga sheegnay saxaraha ugu quruxda badan Afrika.
Iyada oo ku dhawaad ​​sagaal iyo badh milyan oo kiiloomitir oo laba jibbaaran ah, lamadegaankan aan aad ugu dhownahay ayaa ah kan ugu weyn adduunka oo ka mid ah kuwa kulul (saddexaad ka dib Arctic iyo Antarctica). Dhab ahaantii, waxay ku fidsan tahay Badda Cas ilaa inta Badweynta Atlaantik, oo haysta inta badan Waqooyiga Afrika. Dhab ahaan dhanka koonfureed wuxuu gaaraa gobolka Sahel, taas oo u adeegta sidii u -guuritaankii sawaannada Suudaan.
Sidaad u malayn karto, dhul baaxaddiisu aad u weyn tahay inaad wax badan aragto. Sababtaas awgeed, waxaan kuu sheegi doonnaa oo keliya meelo run ahaantii cajiib ah oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan Saxaraha. Sidoo kale, waxaan u samayn doonnaa oo keliya kuwa ku sugan aagga Marooko. Kuwa ku sugan koonfurta Aljeeriya ama Liibiya waxay noqon karaan kuwo khatar ah sababtuna tahay xasillooni -darrada siyaasadeed ee aagga.
Waxaan ku bilaabaynaa Merzouga, magaalo yar oo ku taal koonfur -bari ee Morocco halkaas oo aad ka arki karto qorrax -dhaca aan la iloobi karin. Laakiin waxaan ka hadli doonnaa isaga, wax walba, maxaa yeelay aad ayaad u heli doontaa Erg Chebbi, mid ka mid ah qeybaha ugu quruxda badan ee godadka saxaraha oo dhan. Qaarkood waxay gaaraan 200 mitir oo dherer ah, oo leh codadka oranji, waxay ku siinayaan aragti aan caadi ahayn.
Waa inaadan sidoo kale seegin dooxa draa, halkaas oo aad ka heli doonto lamadegaanka sidii aad waligaa u malaynaysay. Yacni, ciid balaadhan baa leh oo, marba marka ka dambaysa, oasis leh geedo timireed.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad doorbideyso dhinaca ugu dadka badan ee midabka Afrika, waxaad ku leedahay booqasho aan laga fursan karin Ouarzazate, oo loo yaqaan "albaabka lamadegaanka" iyo sidoo kale "Hollywood -ka Sahara". Magacan dambe ayaa sabab u ah xaqiiqda ah in filimaan badan lagu toogtay meeshan.
Magaalada Ouarzazate waa inaad ku aragtaa wax cajiib ah kasbah by Taourirt, qalcadda adobe oo la dhisay qarnigii XNUMXaad si loo ilaaliyo marinkii hore ee dahabka. Laakiin waa inaad sidoo kale booqataa suuqeeda dhexe, oo ay ka buuxaan deegaan; fagaaraha Almouahidine iyo farsamada gacanta.
Ugu dambayntii, ilaa shan iyo toban mayl magaaladii hore, waxaad leedahay mid kale kasbah kaas oo haya magaca Goobta Dhaxalka Adduunka. Waa tii Ait ben haddou, qalcad weyn oo Berber ah oo derbi weyn leh oo ku jirta xaalad aad u wanaagsan oo daryeel.
Beerta Transfrontier Kgalagadi
Namibia Waxay ka mid tahay waddamada Afrika ugu saxaraha badan. Gaar ahaan, Kalahari wuxuu hayaa qayb ka mid ah dushiisa, laakiin sidoo kale xargo ballaaran Botswana y Koonfur Afrika (halkan ayaan kaaga tagaynaa maqaal ku saabsan dalka dambe), maadaama ay leedahay baaxad ku dhow hal milyan oo kilomitir oo isku wareeg ah.
Markii ugu horraysay ee qof shisheeye ah uu ka tallaabsado waxay ahayd 1849. Magaciisu wuxuu kuugu dhawaaqi doonaa sidaad u taqaannay David nool, daahfurka Victoria Falls. Iyo, sida xiisaha leh, waxaan kuu sheegi doonnaa in «kgalagadi» macnaheedu yahay «harraad weyn».
Dhulkan lama -degaanka ah ee weyn waxaad ka arki kartaa Beerta Qaranka Chobe, oo lagu garto maroodiyaal fara badan, inkasta oo ay sidoo kale leedahay buffalo, hippos, giraffes iyo impalas. Si kastaba ha ahaatee, si aad u aragto libaaxyo waa inaad u tagtaa Kaydka Ciyaarta ee Kalahari Dhexe.
Sidoo kale wuxuu ka dhex muuqdaa lamadegaankan Beerta Transfrontier Kgalagadi, laakiin, ka sarreeya oo dhan, the Guryaha Cusbada ee Makgadikgadi, kuwaas oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn dunida. Waxaa la sameeyay markii ay engegeen baddii weynayd ee isku magaca ahayd, taas oo kumanaan sano ka hor qabsatay dhul ka weyn Switzerland. Iyagu waa kuwo aan caqli gal ahayn taasna waxay gacan ka geysatay ilaalinteeda. Aadamigu aad buu u dhexgalay.
Lamadegii hore ee Namib
Ku dhufo lamadegaanka Namib
Mid ka mid ah lamadegaanka ugu quruxda badan Afrika, Namib wuxuu kaloo u taagan yahay da'diisa, maadaama la tixgeliyo ugu da'da weyn adduunka. Dhab ahaantii, waxaa la rumeysan yahay inay horey u jirtay 65 milyan oo sano ka hor. Tanina waa mid ka mid ah sababaha loogu dhawaaqay Goobta Dhaxalka Adduunka.
Sida laga yaabo inaad ka qiyaastay magaceeda, sidoo kale waxaa laga helaa Namibia waxayna leedahay baaxad dhan ilaa siddeetan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah. Haddii aad booqato, ciiddeeda guduudan ayaa soo jiidan doonta dareenkaaga, laakiin sidoo kale qaar ka mid ah qodobbada ugu xiisaha badan.
Si aad u bilowdo, hal dhinac ayaa ah Cape Croos, meeshii ugu horreysay ee reer Yurub yimaadeen 1486. ​​Waqtigan xaadirka ah, waxay hoy u tahay kaydka ugu weyn ee orso -badeedka Afrika oo dhan.
Ku dhow tii hore, waxaad kaloo leedahay caan Xeebta Qalfoofka, oo ka mid ah meelaha aan la gaari karin ee dhulka dalka. Waxay magaceeda ku leedahay tirada doonyaha xanniban iyo qalfoofka nibiriga ee aagga.
Laakiin malaha waxa ugu soo jiidashada badan ayaa ah Namib Naukluft Park, halkaas oo aad ku arki karto godad ilaa saddex boqol oo mitir. Ugu dambeyntiina, sida xiisaha leh, hal dhinac oo ka mid ah lamadegaanka Namib waa magaalada cirfiidka ah Kolmanskop, magaalo macdan -qodis ah oo ay dhiseen horraantii qarnigii XNUMX -aad ee Jarmalku si ay gabaad -u -doonka dheemanka u helaan.
Danakil, oo ka mid ah saxaraha ugu quruxda badan Afrika
Folkaanaha Erta Ale, ee lamadegaanka Danakil
Waxay ku taallaa qaybta koonfureed ee Eritrea iyo waqooyi -galbeed ee Itoobiya, oo buuxa Geeska Afrika, Lamadegaankan waxaa lagu tiriyaa inuu yahay meelaha ugu hooseeya uguna kulul meeraha, oo heerkulkiisu ka sarreeyo konton digrii Celsius.
Waxay leedahay baaxad ku dhow laba boqol iyo labaatan kun oo kiiloomitir oo laba jibaaran waxayna u taagan tahay foolkaanadeeda, guryo milix oo waaweyn iyo harooyin ay samaysay lava. Kuwii hore, kuwii Dabbahu, oo dhererkeedu yahay 1442 mitir, iyo Erta Ale, ka yar, laakiin weli firfircoon.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan lama -degaankan aan noolayn ayaa ah inay tahay dhulkii hooyo Dadka Cafarta, qowmiyad xoolo -dhaqato reer -guuraa ah oo ku sifaysan mindiyo qaloocan oo waaweyn iyo timahooda oo leh gambaleel. Waxay dhistaan ​​guryahooda ku meelgaarka ah ama aris leh laamo iyo marooyin samaysanaya magaalooyin la yiraahdo dameeraha.
Tenerife Desert, fidinta Sahara
Waxaan u dhaafnay dhammaadka mid kale oo ka mid ah lamadegaanka ugu quruxda badan Afrika oo, dhab ahaantii, ah fidinta Saxaraha ee koonfurta. Laakiin waxaan si gooni ah ula dhaqmaynaa sifaha gaarka ah ee badan. Dhab ahaantii, "teneré" waxaa loola jeedaa "lamadegaan" luqadda Tuareg.
Qiyaastii afar boqol oo kun oo kiiloomitir oo laba jibbaaran, waxay ka soo baxdaa dhanka galbeed Chad ilaa waqooyi -bari ee Niger. Oo, ka hor intaanan sii wadin inaan kuu sheego wax ku saabsan, kama hor istaagi karno inaan kuu sheegno mid kale oo xiisahiisa ah. Waxaa degay wicitaankii Geedka Ténéré, kaas oo haystay aqoonsiga keli ah ee ah in uu yahay kan ugu cidlada badan adduunka, maadaama uu ahaa kii kaliya ee ku jiray kilomitir badan oo ku wareegsan. Sannadkii 1973 -kii, waxaa lagu burburiyey baabuur xamuul ah, maantana, farshaxan bir ah oo xusuusinaya inuu booskiisa haysto.
Laakiin Ténéré wuxuu ka mid yahay lamadegaanka ugu quruxda badan Afrika sababo kale awgood. Si aad u bilowdo, sababtoo ah muuqaalka weyn ee cidlada ah ee ciidda ay samaysato. Laakiin sidoo kale hadhaagii qadiimiga ahaa ee badnaa waxay ku yaalliin guryo. Malaha toban kun oo sano ka hor cimiladeedu way ka duwanayd maxaa yeelay waa la degganaa.
Xaqiiqdii gudaha Tassili n'Ajjer, dhul bannaan oo ku dhex yaal aagga, waa mid ka mid ah farshaxannada dhagaxa ee ugu muhiimsan adduunka. Wax aan ka yarayn shan iyo toban kun oo tusaalooyin oo sawirro ah iyo xardho laga soo bilaabo waagii Neolithic ayaa la helay oo matalaya nolosha iyo caadooyinka dadka u dhashay aaggaas. Waxay u dhigmaan inta badan dhaqanka kiffian.
Dhinaca kale, aagga u dhigma Niger waxaa ka jira muuqaal cajiib ah buuraha Aïr, cufnaan leh cimilo Sahelian oo leh meelaha ugu sarreeya oo gaadha 1800 mitir oo jooggiisu sarreeyo lehna qaab -dhismeedyo juqraafiyeed oo cajiib ah.
Iyo, inta u dhaxaysa buurahan iyo lamadegaanka laftiisa, magaalada Agadez, caasimadda mid ka mid ah fiefdomyada dhaqanka Tuareg. Waxaa laga yaabaa inaad jirrabto inaad u malayso in magaaladan yari aysan haysan wax ay ku siiso. Ma jiraan wax ka fog xaqiiqda. Xarunteeda taariikhiga ah ayaa lagu dhawaaqay Dhaxalka aduunka, abaalmarin uu la wadaago dhammaan lamadegaanka Tenerife.
Dhab ahaantii, taariikh ahaan waxay ahayd meel ay maraan waddooyin badan oo ganacsi. Xataa maanta waa ka bixitaanka kan u horseeda Sabha, mid ka mid ah dariiqyada ugu nugul ee adduunka oo gaadiidkooda qof walba uusan heli karin.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah saxaraha ugu quruxda badan Afrika. Laakiin waxaan xusi karnaa kuwa kale oo la mid ah Lompoul, Senegal, oo leh ciid -ciideed oranji ah; mid ka mid ah Taru, Kenya, Kilimanjaro u dhow, ama tii Ogaden, Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, dhammaantood ma aha kuwo la awoodi karo inaan booqanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Guides » Saxaraha ugu quruxda badan Afrika